Hery Rajaonarimampianina : “Ampy izay, ‘ndao hasandratra ny firenena “ -
AccueilRaharaham-pirenenaHery Rajaonarimampianina : “Ampy izay, ‘ndao hasandratra ny firenena “
Mazava ny vina politikan’ny filoham-pirenena omaly nandritra ilay hetsika ho an’ny fisandratana teny amin ny lapam-panjakana Iavoloha, ho azy dia ho an’ ny Malagasy ny fisandratana ka ilay ampahafantarina ny rehetra “ mila vision lavitra isika, ary tsy mila any Paris no hanehoana ny Emergence” hoy ny Filoha. Manoloana izany fahavononan’ny filoha izany dia anisan’ny nataony voalohany ny fiantsoana ny Malagasy rehetra amin’ny fahavononana hifanampy hanova toe-tsaina, ary izany dia nampisehoan’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina tamin’ny alalan’ny pyramida io firaisan-kina io no ambony indrindra. Ka manoloana ireo rehetra ireo no nitondran’ny filoham-pirenena tokoa izany hoe fisandratana izany, izay antoka amin’ ny ho avy ny vina 2030 ny fanovana, satria hoy ny filoham-pirenena hoe “ny atao hoe fisandratana dia mitovy amin’ ny hoe fihavanana ary misy dika roa mitovy. Ny voalohany hoy ny Filoha dia ny lafin’ny ekonomika sy ny ara-bola, ary ny faharoa dia ny kolontsaina , foto-pisainana, sy ny fivoaran’ ny teknolojia”. Manoloana io fahavononan’ny filoham-pirenena sy ny fahavonony amin’ ny fampandrosoana io, dia nasongadiny mafy ny mikasika ny tokony hanafoanana tanteraka ny krizy politika eto Madagasikara “mba miakatra kely i Madagasikara dia inona no zava-mitranga, dia tonga ny fifanoherana politika ka mampidina hatrany ambany ny toe-karena. Noho izany dia izaho filoham-pirenena eto no miteny fa tena manda sy manohitra tanteraka ny fiverenan’ny krizy” hoy ny hatrany ny filoha Hery Rajaonarimampianina amin’ ny fiteny hentitra sy mahitsy.
Iaina ny fiovan-toetra hoy ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, satria ilaina tanteraka izany amin’ ny fisandratana. Tsy natao hijery ny any aoriana intsony isika, fa kosa hiroso amin’ny fisandratana ary hijery tanteraka ny any aloha, “ ny fijery dia ny fijerena ny fiovana iraisam-pirenena ahafahana mametraka vina lavitr’ezaka”. Teto dia mbola nilaza ny Filoha mahakasika ny fahapotehana noho ny krizy izay tsy ahafahana misondrotra sy izay fijerevana lavitra izay“ ny krizy teto no nahatonga antsika nanao teti-pohy tahaka ny mangahazo ny fiainam-pirenena , ka tsy nahafahana nijery lavitra”. Mazava tanteraka ihany koa ny nambaran’ny Filoha noho ireo mety ho fanimbana ny firenena ireo, ka mba ahitan’ny vahoaka ny olona tena vonona amin’ izay fametrahana ny fitoniana sy ny fisandratana izay dia ilaina olona mendrika “ raha ohatra tsy misy ny bonne gouvernance dia misy hatrany ny krizy , dia lasa miverina any amin’ ilay hoe médiocrité ny firenena. Noho izany raha tsy misy ny méritocratie dia miverina any amin’ ny médiocrité izany ny fitondrana. Ka io olona manana io antsoina méritocratie dia aoka izay mendrika sy manana fahaiza-manao no homena fitokisana, izay tsy mifidy tavan’olona, ka ao anatinny fifidianana sy mason-tsivana no hahitana an’izany “ hoy ny Filoha Hery Rajaonarimampianina.